Wararka - Immisa ayaad ka ogtahay 10ka farshaxan ee ugu caansan adduunka?
Immisa ka mid ah 10-kan farshaxan ee aad ku ogtahay adduunka?Saddex cabbir ahaan, farshaxan (Sawir gacmeedyo) waxay leeyihiin taariikh dheer iyo sooyaal iyo haynta farshaxanimo hodan ah. Marble, naxaas, alwaax iyo waxyaabo kale ayaa la xardhay, la xardhay, lana xardhay si loo abuuro sawirro muuqaal ah oo la taaban karo oo farshaxan leh oo leh meel cayiman, oo ka tarjumeysa nolosha bulshada iyo muujinta dareenka bilicsanaanta farshaxanleyda, Muujinta farshaxanka ee himilooyinka bilicsanaanta.Horumarinta farshaxanka reer Galbeedku waxay soo martay saddex meelood, oo soo bandhigaysa sawirka buuxa ee farshaxanka sidaan ku naqaan. Waxay gaartay heerkeedii ugu horreeyay ee Giriiggii hore iyo Rome. Tirada ugu sarreysa waxay ahayd Phidias, halka Renaissance Talyaani ay noqotay tii labaad. Michelangelo shaki la’aan wuxuu ahaa shakhsigii ugu sarreeyay ee xilligan. Qarnigii 19aad, Faransiiska waxaa ugu wacnaa Guusha Rodin oo wuxuu galay kaalinta saddexaad.
Kadib Rodin, farshaxanka reer Galbeedka wuxuu galay xilli cusub-xilligii farshaxan casri ah. Farshaxanyahannada farshaxanku waxay isku dayaan inay ka takhalusaan silsiladaha farshaxanimada caadiga ah, qaataan noocyo cusub oo muujinta, iyo raacida fikradaha cusub.
Maalmahan, waxaan ku tusi karnaa hal-abuurnimada farshaxanka iyo guulaha laga gaadhay xilli kasta iyada oo loo marayo taariikhda dusha sare ee farshaxanka farshaxanka ah, waana in 10-ka sawir gacmeed la ogaadaa.
Bustka Nefertiti waa sawir 3,3-sano jir rinji ah oo laga sameeyay nuuradda iyo balastar. Taalada la xardhay waa Nefertiti, oo ah Xaaska weyn ee Boqortooyada Fircoonkii hore ee Masar Akhenaten. Waxaa guud ahaan la rumaysan yahay in taalladan uu ku xardhay farshaxan-yahan Thutmose 1345-kii Miilaadiga.
Bustka Nefertiti wuxuu noqday mid ka mid ah sawirada sida weyn loo qaddariyo ee Masar hore oo leh soo-saarista ugu badan. Waa bandhigii xidigta ee Matxafkii Berlin waxaana loo arkaa inay tahay tilmaame caalami ah oo bilic leh. Taallada Nefertiti waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee farshaxanka farshaxanimadii hore, oo loo barbar dhigi karo maaskaro ee Tutankhamun.
Taaladaani waxay muujineysaa haweeney qoorta dheer, sunnayaasha qaab-qurxoon u eg, dhabannada sare, sanka oo dhuuban, iyo bushimaha guduudan oo dhoola cadeynaya. Waxay ka dhigaysaa Nefertiti shaqo faneed hore. Mid ka mid ah haweenka ugu quruxda badan. ”
Matxafka cusub ee ku yaal Matxafka Jasiiradda ee Berlin.
Ilaahii Guusha ee Samothrace
Ilaahaddii guusha ee Samothrace, taallo marmar ah, oo dhererkeedu yahay 328 cm. Waa shaqadii asalka ahayd ee farshaxan caan ah oo ka badbaaday xilligii Griiggii hore. Waxaa loo arkaa inay tahay khasnad naadir ah qoraagana lama baari karo.
Waxay isugu jirtaa farshaxan adag oo jilicsan oo loo sameeyay si loo xuso guuldaradii Demetrius, oo ku guuleystey Samothrace dagaalkii hore ee badda ee Griiga, ee ka dhanka ahaa raxantii King Ptolemy ee Masar. Qiyaastii 190 BC, si loo soo dhoweeyo boqorrada iyo askarta guusha leh, taalladan waxaa laga taagay macbudka hortiisa oo ku yaal Samothrace. Isagoo ku wajahan neecawda badda, ilaahadda waxay faafisay baalasheeda quruxda badan, sidii iyadoo dooneysa inay qabato geesiyaasha xeebta yimid. Madaxa iyo gacmaha taallada waa la jarjaray, laakiin jirkeeda quruxda badan wali waa lagu muujin karaa dharka khafiifka ah iyo laab laabaadka, oo ka soo baxaya firfircoonaanta. Taalada oo dhami waxay leedahay ruux aad u tiro badan, oo si buuxda uga tarjumeysa dulucdeeda kana tagaysa sawir lama ilaawaan ah.
Louvre-ka jira Paris waa mid ka mid ah saddexda khasnadood ee Louvre.
Aphrodite ee Milos
Aphrodite ee Milos, oo sidoo kale loo yaqaan Venus oo leh Gacan Daran. Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay taalada ugu quruxda badan dumarka Giriigga illaa iyo hadda. Aphrodite waa ilaahadda jacaylka iyo quruxda quraafaadyadii hore ee Giriigga, iyo mid ka mid ah laba iyo tobanka ilaah ee Olympus. Aphrodite kaliya ma ahan ilaahadda galmada, sidoo kale iyadu waa ilaahadda jacaylka iyo quruxda adduunka.
Aphrodite wuxuu leeyahay muuqaalka iyo muuqaalka saxda ah ee dumarka Griigga qadiimiga ah, astaan ​​u ah jacaylka iyo quruxda dumarka, waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay astaanta ugu sareysa ee quruxda jirka dumarka. Waxay isugu jirtaa xarrago iyo soo jiidasho. Dhamaan dabeecaddeeda iyo luuqadeeduba waxay mudan yihiin in la ilaaliyo lana adeegsado Moodel, laakiin ma matali karto dhawrsanaanta dumarka
Sidee gacmihii lumay ee Venus oo ay lajireen Hubka Jabsaday markii hore ay u ekaadeen waxay noqdeen mawduuca qarsoodiga ah ee inta badan xiiseeya farshaxanada iyo taariikhyahanada. Farshaxanku wuxuu hadda ka jiraa Louvre ee Paris, mid ka mid ah saddexda hanti.
Sawirka naxaasta ah ee Donatello “David” (c. 1440) waa shaqadii ugu horeysay ee soo nooleysa dhaqankii hore ee taallo qaawan.
Taalada, sawirka kitaabiga ahi hadda maahan astaan ​​fikradeed, laakiin waa nolol, hilib iyo nolol dhiig. Adeegsiga sawirrada qaawan si loogu muujiyo sawirro diimeed loona xoojiyo quruxda jidhka waxay muujineysaa in shaqadani ay leedahay muhiimad muhiim ah.
Markuu boqor Herodos reer binu Israa'iil xukumay qarnigii 10aad ee dhalashadii Ciise ka hor, Falastiiniyiintu way duuleen. Waxaa jiray nin dagaalyahan ah oo magiciisa la yiraahdo Goliath, oo dhererkiisu ahaa 8 dhudhun isla markaana ku hubaysnaa suul weyn. Reer banu israa'iil waxay ku dhiiran waayeen inay dagaallamaan 40 maalmood. Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa wiil yar oo Daa'uud ahaa wuxuu booqday walaalkiis oo ciidanka ka mid ah. Waxa uu maqlay in Goli'ad uu aad u danaynayo oo dhaawacay hankiisa. Wuxuu ku adkaystay in Boqor Herodos ogolaaday ceebtiisa inuu u baxo oo reer binu Israa'iil ku dilo Goliyaat. Herodos ma codsan karin. Markii Daa'uud soo baxay, ayuu qayliyey oo Goli'ad madaxa kaga dhuftay makiinada wadhaf. Ninkii weynaa oo yaabay ayaa dhulka ku dhacay, oo Daa'uudna seeftiisii ​​ayuu si xoog leh ugu bixiyey, oo wuxuu ka gooyay Goli'ad madaxiisa. Daa’uud waxaa loo sawiray inuu yahay wiil adhijir ah oo qurux badan oo ku jira taallada, isagoo xiran koofiyad adhijir ah, oo seeftiisa ku haysta gacanta midig, oo wuxuu ku istaagayaa madaxa Goliath oo la gooyey cagihiisa hoostiisa. Muuqaalka wejigiisa waa mid firaaqo leh oo umuuqda inuu yara faanayo.
Donatello (Donatello 1386-1466) wuxuu ahaa jiilkii ugu horreeyay ee fanaaniintii Renaissance-kii Hore ee Talyaaniga iyo farshaxan-yahankii ugu fiicnaa qarnigii 15-aad. Farshaxanku wuxuu hadda ku yaal Bargello Gallery ee magaalada Florence, Talyaaniga.
Taallada "David" waxaa la abuuray horraantii qarnigii 16aad. Taallada ayaa dhererkeedu yahay 3.96 mitir. Waa shaqo wakiil ah Michelangelo, oo ah sayidka farshaxanka Renaissance. Waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah astaamaha aadanaha ee ugu faanka badan taariikhda farshaxanka reer galbeedka. Sawirkii Michelangelo ee David madaxiisa waxyar ayuu bidix ugu leexday dagaalka ka hor, indhihiisu waxay u jeedeen cadawga, gacantiisa bidix waxay ku haysatay garabka garabka, gacantiisa midigna si dabiici ah ayey u dhacday, feedhihiisu xoogaa way isku dheceen, muuqaalkiisu wuu daganyahay, wuxuuna muujinayaa deganaanshaha David. , geesinimo iyo qirasho guul. Ka jira Akadeemiyada Florence ee Farshaxanka Fiican.
Taallada Xorriyadda (Taallada Xorriyadda), oo sidoo kale loo yaqaan 'Liberty Enlightening The World (Liberty Enlightening The World'), waa hadiyaddii 100-guuradii ee Faransiiska ee Mareykanka ee 1876. Taalada Xorriyadda waxaa dhammaystiray farshaxanistaha caanka ah ee Faransiiska Bartholdi 10 sano gudahood. Lady Liberty waxay ku labisan tahay dharkii hore ee Giriigga, taajka ay xidhatana wuxuu astaan ​​u yahay toddobada cirif ee toddobada qaaradood iyo afar badaha adduunka.
Ilaahadda ayaa gacanta ku haysa toosh tilmaamaya xorriyadda gacanta midig, gacanteeda bidixna waxay haysaa “Baaqa Madax-bannaanida” ee lagu xardhay 4-tii Luulyo 1776, cagihiisana waxaa ka jaban silsilado, silsilado iyo silsilado. Waxay astaan ​​u tahay xorriyadda waxayna ka go'day xaddidaadaha cadaadiska. Waa la dhammaystiray lana soo saaray 28-kii Oktoobar, 1886. Qaab-dhismeedka gudaha ee taallada birta lagu farsameeyay waxaa naqshadeeyay Gustave Eiffel, oo markii dambe ka dhisay Eiffel Tower-ka Paris. Taallada Xorriyadda waa mid dhererkeedu yahay 46 mitir, oo saldhiggeedu yahay 93 mitir, culeyskeeduna yahay 225 tan. Sannadkii 1984-kii, Taallada Xorriyadda waxaa lagu taxay inay tahay hiddaha dhaqanka adduunka.
"Fikirka" wuxuu qaabeeyaa nin xoog badan oo shaqeynaya. Ragii weynaa ayaa fooraray, jilbaha laaban, gacanta midig oo garka taagaya, aamusnaan ku daawanaya musiibada ka dhacday hoosta. Aragtidiisa qoto dheer iyo tilmaamtii uu ku qaniinay feedhkiisa bushimahiisa waxay muujisay xaalad aad u xanuun badan. Sawirka farshaxanku waa mid qaawan, oo leh suun yara foorarsan. Gacanta bidix si dabiici ah ayaa loo dhigaa jilibka bidix, lugta midig waxay taageertaa gacanta midig, gacanta midigna waxaa laga qaadaa taalada garka leh ee fiiqan. Feedhkii ku xidhnaa bushimaha ayaa laga saaray. Aad ayey u habboon tahay. Waqtigaan, muruqyadiisa ayaa si cabsi leh u qulqulaya, oo muujinaya khadadka buuxa. In kasta oo sawirka taalada wali taagan yahay, haddana waxay umuuqataa inuu muujinayo inuu qabanayo shaqo xoog leh oo muujin xushmad leh.
“Fikirka” waa tusaale ka mid ah nidaamka guud ee shaqada Auguste Rodin. Sidoo kale waa milicsiga iyo milicsiga dhaqankiisa farshaxannimo ee sixirka ah. Waxay sidoo kale ka tarjumaysaa dhismihiisa iyo isdhexgalkiisa fikirka farshaxanka Aadanaha-Nidaamka fikirka farshaxanka ee Rodin Markhaati.
Jeff Koons (Jeff Koons) waa farshaxan caan caan ah oo reer Mareykan ah. Sannadkii 2013, eeygiisa buufinka (liinta) waxaa laga sameeyay bir bir ah oo dahaadhan oo dahaaran, Christie wuxuu awooday inuu dhigo qiime rikoor ah oo gaaraya $ 58.4 milyan. Koons waxay kaloo abuurtay noocyo kale oo buluug, magenta, casaan iyo jaalle ah.
Shaqada caanka ah "Spider" ee Luis Bourgeois waxay ka dheer tahay 30 fuudh. Waxa cajiibka ah ayaa ah in farshaxan-weynta caarada ay la xiriirto fanaanka hooyadiis oo iyadu ahayd roogaha hagaajiya. Hadda, farshaxannada caarada aan aragno, oo u muuqda kuwo jilicsan, lugaha dhaadheer, waxay si geesinimo leh u ilaalinayaan 26 ukun marmar ah, sida haddiiba ay isla markiiba hoos u dhacayaan, laakiin sidoo kale waxay si guul leh u kiciyeen cabsida dadweynaha, caarooyinka ayaa ah muuqaalkooda soo noqnoqda 1996. Sawir gacmeedkani wuxuu ku yaal Matxafka Guggenheim ee Bilbao. Luis Bourgeois ayaa mar yiri: Da'da weyn ee qofka, ayaa ka caqli badan.
Ayaa abuuray Dagaalyahannada Terracotta iyo Fardo Qin Shihuang? Waxaa lagu qiyaasaa inaan jawaab loo helin, laakiin saameynta ay ku leedahay jiilalka dambe ee farshaxanka ayaa wali jirta maanta waxayna noqotay isbeddel mooddo ah.